Varavarana varavarana tany am-boalohany hitsena ny tranonao | Bezzia
Susana godoy | 09/09/2021 14:00 | Fitaovana ao an-trano
Ny antsipiriany rehetra amin'ny haingo dia manisa. Noho izany, rehefa manaingo ny tranontsika isika dia manandrana manome azy manokana sy manokana. Raha iray amin'ireo te hisafidy ny originality ianao dia vintana amin'ireo doormats tany am-boalohany. Voalaza hatrany fa ny taratasy firakotra dia milaza betsaka momba ny atitany ary amin'ity tranga ity dia tsy ho latsa-danja izany.
Satria noho ireo doormats ireo, ny fifaliana dia ho ampahany amin'ny dingana voalohany ataontsika. Afaka misafidy ianao andianteny tany am-boalohany, replika sarimihetsika na antsipiriany maro hafa izay ho hita taratra amin'ny tany. Ho iray amin'ireo mpifanila vodirindrina mahatsikaiky indrindra amin'ity trano ity ianao. Tsy mieritreritra ve ianao?
1 Ny hafatra tsara indrindra ho an'ireo mpitsidika izay mitondra doormats
2 Doormats hitsena amin'ny fomba voalohany
3 Mpanidy varavarana manokana
4 Andian-tantara tianao indrindra
Ny hafatra tsara indrindra ho an'ireo mpitsidika izay mitondra doormats
Ny fitsidihana any an-trano foana, na saika, dia tongasoa. Fa mazava ho azy, na dia tsy te hiseho ho tsy dia ilaina aza isika dia mangina amin'ny zavatra eritreretintsika. Noho izany, raha tsy hainao ny milaza hoe tsy tonga maina izy ireo, tsy misy toa ny filokana doormats sasany izay misy andian-teny mivantana toy izany toy ny: 'Ny mpitsidika ambony dia manangona labiera sy fako ambany.' Angamba amin'ny fotoana hidirany dia raisin'izy ireo ho zava-dehibe na farafaharatsiny, mitsiky no hipoitra ary raha tianao izany dia azonao atao ny mividy azy eto mitovy
Ny varavaram-baravarana hafa dia miresaka divay, na hanakatonana ny toe-po ratsyNa dia tsy ara-materialy aza dia zavatra ankasitrahantsika izany. Ny sasany aza manana ny fitsipiky ny trano mihitsy, ka tsy misy gaga ny hiditra. Araka izany, efa fantatrao izay toherinao. Modely toa East Azo antoka fa hahagaga ny olona rehetra mandalo. Ka mitovy amin'ny originality, mitovy amin'ny itiavantsika azy.
Doormats hitsena amin'ny fomba voalohany
Ny teny hoe 'tongasoa' dia eo koa amin'ny ankamaroan'ny accessories ireo. Fa marina fa ireo izay hitantsika any Amazon dia mitondra azy amin'ny fomba miavaka kokoa. Satria ny teny fotsiny dia mety tsy dia feno loatra, noho izany, miloka isika raha manao firesahana amin'ny sarimihetsika toy ny 'Star Wars' ary ampitao amin'ny lafiny maizina izy ireo East tena ilaina doormat.
Na dia tianao mozika aza ianao dia tsy afaka manadino ny iray amin'ireo Hira rock espaniola toa ilay nohirain'i Miguel Ríos tamin'izany. Amin'izao fotoana izao, azonao atao ihany koa ny mahazo azy eo an-tongotr'ialahy ary tsy nilaza zavatra tsara velively tamin'ny hevitra toa ilay iray eto asehonay anao. Hisy hevitra foana araka ny itiavanao azy!
Mpanidy varavarana manokana
Azo antoka fa afaka manao koa ianao ny doormat anao manokana amin'ny fomba manokana, mba hisolo tena ny ankohonany amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Noho izany, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny miloka amin'ny fametrahana ny anaranao eo ambanin'ny kiraro tsirairay ao anaty endrika rehefa miseho izy ireo. eto. Raha tsy manan-janaka ianao dia mety manana biby fiompy ianao ary afaka manatrika ny doormat anao koa izy ireo, toy ny hoe irery irery ianao na mpivady. Satria ny fianakaviana isan-karazany dia hisolo tena izany hevitra izany.
Andian-tantara tianao indrindra
Raha misy andian-tantara izay nankafizinao indrindra hatrizay 'Namana'. Niaraka indray izy ireo tao anaty karazana fanadihadiana izay azonao atao ny mankafy amin'ny sehatra. Saingy ao aorinan'izany ireo dia niainan'ny trano roa sy namana 6 izay nitondra tsiky maro kokoa noho ny nandrasana. Hatsikana izay na eo aza ny fandehan'ny fotoana dia manohy fahombiazana lehibe, noho izany, tsy misy toa ny fahatsiarovan-tena amin'ny iray amin'ireo sary malaza ankehitriny. Satria fantatsika rehetra ny cafe izay nisy ny sofa misy azy ireo ary nihaona nandritra ny tontolo andro. Afaka mandray an-trano izao ianao amin'ny 'Central Perk' anananao eto. Tsy mety ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Fitaovana ao an-trano » Doormats tany am-boalohany hitsenana ao an-tranonao
Ireo kojakoja vaovao Malababa amin'ny fahalavoana